कुन राशी भएका श्रीमानका श्रमिती राम्रा हुन्छन ? - Open Khabar - नेपाली अनलाइन डिजिटल पत्रिका
कुन राशी भएका श्रीमानका श्रमिती राम्रा हुन्छन ?
यस्तो राशि भएका व्यक्ति केटीको चाहना बुझ्न माहिर मानिन्छन् । कुनै महिलालाई के चाहिएको छ भन्ने कुरा कर्कट राशि भएका पुरुषले सजिलै बुझ्न सक्छन् । साथै केटीलाई कसरी आफूप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने विषयमा पनि कर्कट राशि भएका पुरुषहरु धेरै सजक हुन्छन् । यो राशि भएका धेरै व्यक्ति प्रेम विवाह ९लभ म्यारिज० गर्छन्।